Tonizia : Lasa Hira Fanevan’ny Tanora Ilay Rap · Global Voices teny Malagasy
Tonizia : Lasa Hira Fanevan'ny Tanora Ilay Rap
Voadika ny 17 Novambra 2013 4:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, বাংলা, Italiano, Deutsch, Español, Nederlands, Português, Aymara, عربي, English
Nivoaka tamin'ny 14 Septambra ny ‘Houmani’, hira vaovaon'ireo mpanakanto Toniziana Hamzaoui Med Amine sy Kafon. Nanjary hira fanevan'ny tanora Toniziana io noho ny fanarahan'ny olona maherin'ny 3.4 tapitrisa azy amin'ny YouTube hatramin'izao.
Ilay lahatsary izay nitentina 250 dinars ( 150 dolara eo ho eo ) fotsiny ny namokarana azy, no fitaratry ny fiainana andavan'andron'ireo mponina anjorom-bàla eny ambany tanàna.
Amin'ny tenim-paritra Toniziana, ny mpamaritoetra hoe Houmani dia avy amin'ny anarana hoe Houma, izay azo adika hoe ‘faritra mahantra ‘.
Hazavain'i Ahd Kadhem avy any Iraka ny teny hoe Houmani [ar]:
Ilazàna ireo olona miaina any amin'ny faritra mahantra ny Houmani. Ary any Tonizia dia Houma no ilàzana ny faritra mahantra. Mitantara ny momba ireo faritra onenan'ny sokajy mahantra ireo izay zara raha resahan'ny olo-malaza sy ny mpiasam-panjakana ilay hira rap
Vahiny iray mihaino ny Houmani. Sariitatra avy amin'ny ZOOart
Tantarain'i Hamzaoui sy i Kafon ao anatin'ilay hira ny fiainan'ny tanora any amin'ireny faritra be olona ireny any Tonizia. Toy izao no ambaran'ny ampahany amin'ny tononkira :
Miaina tahaka ny fako ao anaty dabam-pako izahay … manempotra ny [fiainana] aty
Hazavain'ny mpitoraka bilaogy Mehdi Lamloum ny antony mampalaza ny Houmani [fr]:
Houmani, hira tsotra miaraka aminà lohateny hafahafa sy lahatsary tsy nandaniam-bola be, no nahatonga adihevitra lehibe tamin'ny herinandro lasa iny. Izay no lafiny mahaliana amin'ity vokatra ity. Vetivety dia voarain'ny vahoaka sy niteraka resabe sy adihevitra amin'ny lafiny maro ilay hira… Ny resaka faritra onenan'ny mahantra mitaha amin'ny faritra onenan'ny manana no tantarain'ilay hira, na dia tsy lazaina mivantana aza izany ao anatin'ilay hira. Hany ka mipetraka ny fanontaniana momba ny hoe : iza marina no tokony hihaino ny Houmani? Moa ve ireo mponina any amin'ny ‘faritry ny manana’ manan-jo hampitovy ny tenany amin'ny andavan'andron'ireo izay tantaraina ao amin'ny Houmani ve?
Ary mbola nampiany :
Tena manana ny rariny ireo mitsikera ilay hira amin'ny fomba fijery ny lafiny mozika. Nefa tokony hojereny izay ao ambadik'io hira io : sangan'asa izay nahavita nandika ny ampahan-javatra tsapan'ny Toniziana na avy any amin'ny faritry ny mahantra izy na tsia, na miaina amin'ny fiainana isan'andro voatantara ao amin'ilay hira izy na tsia …